CNC လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone လဲမှို့နိုင်လွန်အကွေ့အကောက်များသောစက် - တရုတ် CNC လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone လဲမှို့နိုင်လွန်စက်ပေးသွင်းအကွေ့အကောက်များသော,စက်ရုံ -FEIHU
winder စက်ချည်ခင်ကန်တော့ချွန်အကွေ့အကောက်များသောစက်ဇာထိုးဘို့ကောင်းသောကြိုးကန်တော့ချွန်ပုံသဏ္ဍာန်လေအသုံးပြုသည် Cone မှ Hanks,warping, ယက်လုပ်ခြင်း, ဆေးဆိုး,အရောင်ချွတ်,စသည်တို့ကို. ဒါဟာဝါဂွမ်းချည်အဘို့သင့်လျော်သည်,သိုးမွှေးကြိုး,polyester ကြိုး,etc.CNC လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံလူပျိုထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone လဲမှို့နိုင်လွန်စက်အကွေ့အကောက်များသော
ကြိတ်စက်နှင့်အတူစက်အကွေ့အကောက်များသော Hanks စေရန် Cone
တဦးတည်းမော်တော် Hanks စေရန် Cone ကြိတ်စက်နှင့်အတူစက်အကွေ့အကောက်များသော
24(6 ဗိုင်းလိပ်တံ / အုပ်စုတစ်စု), 48, 96 (optional)
220V ကို 50HZ တစ်ခုတည်းအဆင့် (optional)
120w / ဗိုင်းလိပ်တံ
500-600မီတာ / မိနစ်(မြန်နှုန်းချိန်ကိုက်)
ပြားချပ်ချပ် bobbin Φ 80mm×220မီလီမီတာ
သို့မဟုတ်ကန်တော့ချွန် Φ 80မီလီမီတာ×220မီလီမီတာ taper 3.5°
L ကို 1454 x ကဒဗလျူ 690 x က H ကို 1700 မီလီမီတာ (4 ဗိုင်းလိပ်တံ)
205ကီလိုဂရမ် / အုပ်စုတစ်စု
Q1: After-Sales Service အကြောင်း:
တစ်ဦးက: ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကောင်းဖြစ်ပါသည်,ပိုကောင်းတဲ့, အကောင်းဆုံး, ကငြိမ်ဝပ်စွာနေပါစေဘယ်တော့မှ. & ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖြစ်ပါသည်. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းသင်တပြင်လုံးကိုဝယ်ယူမှုတိုးတက်မှုစဉ်အတွင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်.
လွန်ခဲ့သော : နှစ်ချက်ဘေးထွက် Hanks စေရန် Cone စက်အကွေ့အကောက်များသော
နောက်တစ်ခု : လျှပ်စစ် Feed Hanks စေရန် Cone ဓာတု Fiber ပိုးချည်ခင်စက်အကွေ့အကောက်များသော